Mashiinka tuubada birta daadinta ee lagu tuuro ee SML no-hub iyo waxyaabaha ku habboon ayaa buuxinaya heerka BSEN877, DIN19522, ISO6594. Qalabka 100% dib ayaa loo isticmaali karaa oo dib loo isticmaali karaa, oo leh cod gudbin hooseeya, caddeynta dabka, caddeynta daadinta iyo ka hortagga daxalka. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa daadgureynta biyaha dhismayaasha, daadinta, wasakhda iyo hawo-mareenka. Sidoo kale systermka biyaha roobka ee lagu rakibay bannaanka dhismayaasha iyo nidaamka dhulka hoostiisa lagu aasay ayaa la bixin karaa.
Noocyada loo yaqaan 'EN877pipes' ee ka baxsan daaha waa casaan, oo leh dhumuc aan ka yarayn 70um. Dahaarka gudaha waa guduud huruud ah oo leh dhumucdiisu tahay 120um. Ama gudaha iyo dibaddaba waa wax ka badan 120μm budada saliidaha leh ee ka sameysan midabka gaduudka ah.
Qalabka xirmooyinku sidoo kale waa guduudan yihiin gudaha iyo dibaddaba, resin dareeraha saliida ayaa ka sarreeya 70um, iyo saliida budada ah oo ka badan 120um qaro
Tuubbada carrada bir ee dhibta badan iyo waxyaabaha ku xirma waxaa loo isticmaalaa codsiyada socodka culeyska. Tuubooyinkan iyo qalabyadan ayaa loogu talagalay codsiyada cadaadiska, sida xulashada cabirka saxda ah ee bullaacadda, qashinka, hawo-mareenka, iyo nidaamyada daadadka duufaanka. Tuubbooyinku waa tuubo xarun dhexe leh, qaab dhismeedka xargaha, ka xor ah xajiyeynta iyo dilaaga, dusha siman iyo xitaa dhumucda darbiga.
Qalabka birta aan xasaasiga ahayn ee ay ka kooban yihiin qalabka loo yaqaan 'Rubber Gaskets'
Qandaraasyada 'non-hub' waxaa lagu farsameeyaa inay isku xiraan tuubbada birta xarkaha iyo waxyaabaha ku xirma, tuubbada birta iyo tuubooyinka balaastigga ah iyo tuubooyinka naxaas ah
Tuubbada laba-geeska ah ee biraha waxaa loo-saaray iyadoo loo eegayo heerka caalamiga ah ee ISO2531 / EN545 / EN598 / NBR7675. Birta laydhku waa nooc ka samaysan birta, kaarboon iyo silikoonno. Inta lagu gudajiro habka wax soo saarka, waxaan ku fulinaa tijaabooyin khadka tooska ah iyo waxyaabaha tijaabada ah waxaa ka mid ah: cadaadiska dareeraha, dhumuc sibidhka qaro weyn, dhumuc kuleylka zincen, dhumucda lakabka bitumen, cabirka tijaabada, tijaabada soo jiidashada iyo wixii la mid ah. Gaar ahaan, waxaan haysanaa qalabka sawirka-raajada ee aadka u horumarsan si aan u tijaabino dhumucda darbiga ee tuubbo kasta si sax ah si aan u hubin karno tuubooyinka inay u hoggaansan yihiin heerka.
Daboolka: Epoxy Resin rinjiyeynta & Daawooyinka Powder, Dahaarka bitumen.
Qalabka 'Manhole Covers' waxaa loo soo saaray si loo dhiso iyo adeegsiga dadweynaha. Manhole wuxuu ka kooban yahay jir iyo dabool iyo / ama ganaax. Daboolka Manhole wuxuu sifiican u ilaalin karaa amniga dadka lugeynaya iyo gawaarida, wuxuuna si fiican uga hortagi karaa roobka iyo dareeraha kale inay soo galaan. Daboollada Manhole waa inay ahaadaan kuwo siman oo ka madax bannaan godad ciid, godad afuufid, dhalanrog ama cilado kale oo kasta.
Daboolida: Budhimka Madoow Mid kasta oo ka mid ah ka-gogitaankiisa ayaa ku xaddidan ugu badnaan 3mm
Fasalka: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN
1. Waan aqbali karnaa adeegga OEM.
2. Waxyaabaha: Birta Kaarboonku ka sameysan tahay, bir-bir hooseeya, bir-biris aan bir-qabad lahayn, bir-ka-kulka kuleylka, steel steel, iwm.
3. Habka Soosaarista: Dhisida maalgashiga.
4. Teknolojiyada daaweyn dusha sare ah: Plaseeriyada chrome, saarin zinc, saarin naxaas ah, foorno nafaqeysan, sunta anodiyamka ee aluminiumka, fosfiska, kuleylka, guduudka, dhaqaajinta, carbiska, nitriidaynta, buufin dusha iyo qaybaha kale ee teknolojiyada daaweyn dusha sare.
5. Naqshadeynta: Sida waafaqsan macaamiisha qaabeynta, fikrada & muunadaha.
6. Waxyaabaha lagu soo qoro iyo macluumaadka guud waxay waafaqsan yihiin GB, ASTM, BS, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, JIS, ISO iyo qodobbada kale ee qeexaya.
Waxaan soo bandhigi karnaa nooc kasta oo xargaha-xargaha ah kaasoo buuxin kara heerka EN877 DIN19522, iyo sidoo kale qaabab badan oo khaas ah oo la rakibi karo.
Qalabka 100% dib ayaa loo isticmaali karaa oo dib loo isticmaali karaa, oo leh cod gudbin hooseeya, caddeynta dabka, caddeynta daadinta iyo ka hortagga daxalka. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa daadgureynta biyaha dhismayaasha, daadinta, wasakhda iyo hawo-mareenka. Sidoo kale nidaamka biyaha roobka ee lagu rakibay bannaanka dhismayaasha iyo nidaamka dhulka hoostiisa lagu aasay ayaa la bixin karaa. Tuubbooyinka ayaa lagu rakibay dhismayaasha la deggan yahay iyo guryaha, hoteelada, isbitaalada iyo suuqyada wax laga iibsado.
Dareenka birta ah ee loo yaqaan 'EN877 cast steel' daaha gudaha iyo dibaddaba waa guduud cas oo leh dhumucdiisuna ugu yaraan 70um, budada epoxy oo leh dhumuc ugu yaraan 120um oo leh midab gaduud ah.
Birta ceyriinka ah waxay waafaqsantahay ISO185, tuubooyinka ku dhejisan qalabka dhejiska ah ee farsamada guryaha xooga loo yaqaan 'presile xoog min' 150Mpa. Ugu badnaan adag ee Brinell HB260.
Dahaarka gudaha iyo gudaha ayaa ah tayada ugu fiican. Is caabbinta daahan gudaha ah ee lagu buufiyo milixda: ugu yaraan 350h, 700 saacadood oo caadi ah. iska caabin biyo wasakhaysan; ugu yaraan 30 maalmood 23 digrii centigrade.kemiinikada iska caabbinta ah ee ka socota PH2 ilaa PH12 ugu yaraan 30 maalmood 23 digrii centigrade ah. iska caabbinta baaskiil wadida: 1500 wareegyo inta u dhaxaysa 15-93 digrii centigrade.
EN877 BML Hubless Cast Pipe Iron
Tuubbooyinka bullaacadda BML waxaa loogu talagalay nidaamka bullaacadaha.
Dahaarka banaanka: Tuubbooyinka BML waxay leeyihiin xuub zinc ah oo ah ugu yaraan 40um lakabka lakabka (290g / ㎡), in kabadan taasi waxay ku buufin doontaa xirmooyin qulqulaya buluug saliid ah ugu yaraan 80um.
Dahaarka gudaha waa isku xayndaabad saliid ah oo isku mid ah 120um oo lamid ah tuubada SML.
EN877 KML Hiless Cast Pipe Iron
Tuubbada qashin-qubka ee KML iyo qalabka dhejinta waxaa loo isticmaalaa biyaha wasaqda-wasakhda leh ee jikada mihnadeed iyo tas-hiilaadka la midka ah.
Dahaadhka banaanka ah: Lahow daaqad zinc buufin leh oo leh cufnaanta aagga ah ee ah 130g / ㎡, iyo wixii ka sarreeya daboolka saliida ee ugu yaraan 70um.
Dahaarka gudaha waa lakab iskuxiran midab leh orche midab leh lakab laba jibbaaran oo leh lakab isku dhafan oo ah 240um.
Qalabka KML waxaa lagu daboolaa gudaha iyo dibedda leh saliidaha budada ah ee tayada sare leh ee ugu yaraan 120um.
Tuubbooyinka tuubooyinka TML waxay ku saleysan yihiin EN 877, in adeegsiga tuubooyinka SML loogu talagalay rakibidda dhulka hoostiisa.
Dahaarka banaanka: Tuubbooyinka TML waxay wataan zinc buufin leh oo leh cufnaanta 130g / ㎡, in kabadan waxaa jira jaakad buluug ama casaan ah.
Dahaarka gudaha: Daboolku waa midab orche, epoxy 120um.
Xirmooyinka: budada budada budada ah ee 'budada' epoxy budada casaanka ah, 120um ugu yaraan.
BS4622 437 416 Doofaarradii Birta
Tuubbooyinka Grey Iron Socket iyo Spigot Pressure Pipes waxay muddo dheer ka shaqeynayeen warshada dhismaha sidii nidaam biyo mareen oo lagu kalsoonaan karo oo aan qaali ahayn. Waxay waafaqsan yihiin heerka BS4622, BS437 iyo BS416. Tuubooyinka birta cawdu waxay ku samaysan tahay qashin-qubka centrifugal ee looxyada birta, Daboolku wuxuu noqon doonaa bitumen ama resin madow.
BS4622 Sinle Spigot tuubada tuubbada birta oo leh laabatooyin caag dabacsan, DN100-DN700, Dhererka: 1830mm, 4110mm iyo 5120mm
BS437 Sinle Spigot tuubada tuubbada birta oo leh laabatig caag ah oo dabacsan. DN75-DN225 dherer 1830mm + -5mm
BS416 Single Spigot cast iron steel pump pipe D50-DN150
1.Tensile xoogga> 150 N / mm2
2. Cadaadis-Hawleed (3.45 bar 15 ilbiriqsi)
ASTM A888 Huffss Cast Iron Fittings
Qalabka birta ka samaysan ee birta lagu xiro ayaa inta badan loo isticmaalaa qashin-qubka iyada oo loo marayo isku-xir dabacsan. Waxsoosaarka ayaa gabi ahaanba helay heerarka, ASTM A888, CISPI301, waxayna leedahay faa'iidooyinka soo socda: guri siman iyo toosan, xitaa derbiyada tuubbada, xoog sare iyo cufnaanta, jilicsanaanta sare ee dusha gudaha iyo bannaanka ee darbiga, wax cillad ah kuma jiraan aasaasidda, rakibidda sahlan, dayactirka fudud, cimri dheer, caawimaad u leh deegaanka, dab-damis iyo sanqadha.
Daboolida: Gudaha iyo dibedda daaha rinjiga Bituminous
Cabirrada: 1.5 ″, 2 ″, 3 ″, 4 ″, 5 ″, 6 ″, 8 ″, 10 ″, 12 ″, 15 ″
Cast Pirey Iron Pipe iyo Qalabka Qalabka Kiimikada ee Qalabka P ＜ 0.38 S ＜ 0.15 Cr ＜ 0.50 Ti ＜ 0.10 Al ＜ 0.50 Pb ＜ 0.015 C + （Si + P) / 3 CE ＞ 4.10
Guryaha Farsamaysan ee Qalabka Birta ray 145Mpa